Kullanka 2-aad ee kalfadhiga 4-aad ee Golaha Shacabka oo Muqdisho ka socda – Radio Muqdisho
Waxaa maanta si rasmi ah xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho uga furmay Kullanka 2-aad ee kalfadhiga 4-aad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Kulanka waxa shir guddoominaya Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan,siddoo kale waxaa madasha shirka ku sugan guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee Golaha shacabka Baarlamaanka JFS.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya ayaa qodobada maanta ay ka doodayaan waxaa ka mid ah Xaaladda amni ee dalka gaar ahaan amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
168-Xildhibaan oo ka tirsan Golaha shacabka ayaa ku sugan Kulanka 2-aad ee kalfadhiga 4-aad ee maanta furmay.
Wafdi ka socda Golaha Aqalka sare oo u ambabaxay magaalada Kismaayo+Sawirro